Isikhafu (1) Ifektri - China Isikhuhli (1) Abakhiqizi, abahlinzeki
I-BD3A Multi-function Brushin ...
Ikhebula / Ibhethri Escalator Yokuhlanza- SC-450 / D.
Izici Idizayini eyingqayizivele yesondo langaphambili, kulula kakhulu ukuhamba ngayo. Ingasetha isikhwama sothuli ngaphakathi, kulula futhi sihlanzekile. Lungisa ngokuzenzakalela ukuphakama kwe-roller, ukusebenza kahle kokuhlanza! Item yobuchwepheshe I-SC450 SC450D Voltage 220-240V / 50Hz 40V Amandla 1180W 580W Ububanzi obusebenzayo 450mm 450mm Imoto eyomile 220V / 1000W 500W Roll ibhulashi motor 24V / 180W 24V / 180W Isivinini sebhulashi esilingwayo 230RPM 230RPM Amandla 20L 5L Cable 12m - Isisindo 38kg 64.5kg Isisindo esikhulu Ukupakisha okungu-40.2kg 66kg 950x540x31 ...
I-AS-2007 Ride-on Scrubber Drier
I-Ride-on scrubber drier ngumshini obaluleke kakhulu wokuhlanza umhlaba, osebenza ngokuvumelana nezimo, ukwakhiwa kwamabhulashi omabili kanye nokusebenza kahle kokuhlanza. Kusebenza esizeni sokwakhiwa kukamasipala, isikwele, izimakethe ezinkulu, izimboni, indawo yokusebenzela kanye nezindawo zomphakathi ezahlukahlukene.
Lo mkhiqizo umshini kagesi wokuhlanza obaluleke kakhulu wokuhlanza umhlaba. Kulula ukushayela, ukuguquguquka kokusebenza, ukuklanywa kwepuleti elilodwa neliphindwe kabili, ukusebenza kahle kokuhlanza okuphezulu kakhulu, imoto yokudonsa enamandla yokupompa indle ngokuvumelanayo.
Ifanele amasayithi wokwakha kamasipala, izikwele ezinkulu, izitolo ezinkulu, izingxoxo zokusebenzela, njll.
Hamba-Ngemuva Kwe-Scrubber Drier nge-Battery -H8101 / H8102
Inqubo yokusebenzisa i-scrubber drier ilula ngendlela emangalisayo. Ama-scrubber driers asebenzisa iyunithi yokuhlikihla ngaphambili ukunikeza i-flooring yakho ihlanzeke ngokujulile usebenzisa amanzi namakhemikhali. Amanzi angcolile asalayo abese eqoqwa ngokunyakaza okubushelelezi yiyunithi yokomisa yangemuva yomshini, okuvame ukuba nenhlanganisela ye-squeegee nokudonsa okufaka ukungcola noketshezi oluningi kuthangi lokuqukatha.
I-Auto Scrubber Drier-SC50
Isikhuhli Esincane- SC2A
Ukusebenza kahle okuphezulu nokuhlanzekile, ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zemvelo. Akunandaba ngendawo yokudlela, ihhotela, indawo yokudlela, ihholo lekhofi, indawo yokubuka amabhayisikobho, isikhungo sokungcebeleka, ijimi, izakhiwo zehhovisi. Indawo emincane ehlanzekile negebe ingasebenzisa ngokukhululeka, ngenkathi ihlanza ukuphothula okuzenzakalelayo kwendle kabusha, izuza umphumela wokuhlanza ophelele impela.